Indlu yeFrog Corner C16th, iPool & neGadi eneGadi
Isiqingatha sekota 2/3 iintsuku ezikhoyo, ukuqala ngokuhlwanje. Ikona yesele, ichibi kunye nezitiya ezinomhlaba. I-C16th charm kunye ne-C21st yokuphila kwale mihla, imiqadi yoqobo. 5 amagumbi okulala, ama-2 ane-ensuite. Iphuli eshushu yangaphandle (Jun-Sep). Phezulu kweChiltern Hills 'iNdawo yoBubuhle beNdalo obuBalaseleyo', ukuhamba okuthandekayo, iZoo 2 min ukuhamba, iiDowns iimbono ezimangalisayo; 5 min ukuhamba ukuya kwi-Pub&Restaurant; ngokuhlwa Catering ukhetho. Ukupaka iimoto ezi-5 engceni ngaphandle kocango oluncinane lwamaplanga.
I-Frog Corner ibonelela ngamagumbi okulala ayi-5, iibhedi ezi-2 zeKing, iibhedi ezi-3 eziphindwe kabini, iibhedi ezi-2 zabantu abangabodwa. Idama lifudunyezwa ngamatyhubhu elanga angama-88 (lifuna ukukhanya kwelanga) kwaye livule ngoJuni ukuya kuSeptemba. Iindwendwe zinokungena ngasese kwiigadi ezimbini, igadi yangaphambili kwaye, ngasemva i-parterre ene-BBQ kunye ne-patio ezimbini, kwaye kwiigadi eziphambili yindawo evalelweyo yangasese. Intsalela yemihlaba kunye nedrayivu kwabelwana ngayo nabanini. Ukupaka iimoto ezintlanu ubuninzi kubonelelwa kwiCommon ngomnyango wangaphambili. IKona yeFrog iyilwe yaneziqinisekiso eziqinileyo ze-ECO, i-A+++ yezixhobo ezilinganiselweyo, izibane ze-LED, amanzi ashushu elanga, ukufudumeza idama lelanga kunye nokunye. Mininzi imiqadi yoqobo (umqadi omnye ophantsi ekhitshini kunye negumbi elinye lokulala). Abanini bahlala kwiLoji echaseneyo, kwaye bakhona ngazo naziphi na iinkonzo okanye uncedo onokulufuna, (sihlala silima egadini ngelixa unathi).
4.83 · Izimvo eziyi-87
Ikona yesele ibekwe kwindawo yabucala kakhulu ngaphandle kwendlela enkulu. Akukho bamelwane, kwaye kukho ifama ejongene nayo. IZoo ukuba unqwenela ukuyindwendwela, ingaphaya kwendlela (uhambo lwemizuzu emi-2). Kukho ukuhamba okuninzi okumangalisayo ukusuka kwindlu ebekwe kweyona ndawo iphakamileyo yeChiltern Hills. Kukho indawo yokutyela enengca kunye nevenkile yokutyela kumgama wokuhamba kunye necawe yelali, zombini zimacala omabini kwindlela eqhelekileyo edlula elalini. IKona yeFrog ihlelwa njengendawo yobuhle obubalaseleyo (AONB), kwaye kukho inani lokuhamba okuhle kunye nemibono emangalisayo ezolulela kuzo zonke iingingqi ezintathu zeBedfordshire, Hertfordshire kunye neBuckinghamshire.
Abanini bayafumaneka ngalo lonke ixesha kwimibuzo yeendwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Whipsnade